विमान दुर्घटनामा सँगै रहेका काखे बच्चा र श्रीमान हराएकोबारे एक महिलाको रुनै मन लाग्ने यस्तो बयान::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
विमान दुर्घटनामा सँगै रहेका काखे बच्चा र श्रीमान हराएकोबारे एक महिलाको रुनै मन लाग्ने यस्तो बयान
काठमाडौँ – म बंगलादेशी हुँ । मेरो घर ढाकामा पर्छ । मेरो विवाह भएको करिब तीन वर्ष भयो । हाम्रो सानो बच्चा पनि छ । नेपालको सौन्दर्यबारे मैले पढेकी थिएँ । नेपाल घुमेर आएका साथीहरुले पनि मेरो सामु धेरै वर्णन गरेका थिए । त्यसैले म नेपाल घुम्न आतुर थिएँ । परिवारसँग नेपाल घुम्ने सल्लाह भयो । अरु साथीहरुसँग पनि सल्लाह भयो ।
अन्ततः हामी नेपाल आउने तय भयो, मार्चको दोश्रो साता । नेपाल आउने चाहना राख्ने त अरु पनि थिए । तर, उनीहरुको समय मिलेन । अन्तिममा म, मेरो बच्चा र श्रीमानसहित अन्य दुईजना नेपाल आउने निर्णयमा पुग्यौं । सात दिनसम्म नेपाल घुम्ने उद्देश्यले हामी सोमबार ढाकाबाट नेपालका लागि उड्यौं । नेपालमा काठमाण्डु र पोखरा घुम्ने हाम्रो योजना थियो । यसका लागि हामीले सात दिनको छुट्टी लिएका थियौं । नेपाल आउन पाउँदा निकै उत्साहित थियौं । जहाजमा चढेपछि कतिबेला नेपाल पुगिएला भन्ने कौतुहलता मनमा थियो । केही घण्टाको जहाज यात्रापछि डाँडाकाँडा देखियो । हिउँले ढाकिएका पहाड देखिए । निका रोमाञ्चित भएर त्यसलाई नियालीरह्यौं ।
जहाजभित्र काठमाण्डु आइपुगेको ‘अनाउन्स’ भयो । हामी थप रोमाञ्चित भयौं । जहाज अवतरण गर्न तलतल झ¥यो । काठमाण्डुका घर देखिए । पछि विमानस्थलको ‘रन वे’ देखियो । तर, जहाज रन वे तर्फ गएन । मनमा चसक्क पस्यो । जहाज घुम्यो । केहीबेरपछि फेरि रन वे देखियो । तर, जहाज सही दिशामा थिएन । जहाज एक्कासि बजारिएको आवाज आयो । जहाजभित्रका सबै आत्तिए । कोही कराउन लागे । कोही चिच्याउन लागे । जहाजभित्र डढेको गन्ध आउन थाल्यो ।
तर, जहाज रोकिएको थिएन । सिट बेल्ट बाँधिएकाले कोही हिंडडुल गर्न सकिरहेको थिएन । तर, सबै चिच्याइरहेका थिए । केही बेरमा जहाज रोकियो । जहाजमा आगो दन्कियो । जाहाजभित्र यात्रुको भागदौड मच्चियो । सबैले गुहार माग्न लागे । केही रुन थाले । कोही कराउन थाले । मसँगै हुनुहुन्थ्यो मेरा श्रीमान र काखमा थियो सानो बच्चा ।
सिट बेल्ट बाँधिएकाले हामी कहीं जान सकिरहेका थिएनौं । तर, अरुले भने सिट बेल्ट खोलेर जहाजभित्रको इमरजेन्सी ढोका खोल्दै थिए । कोही जहाजभित्रैबाट सिसा फुटाइरहेका देखिन्थे । हामी भने केही गर्न सकिरहेका थिएनौं । तर, जहाज झन्–झ्न् दन्कँदै थियो । बच्चा काखमा च्यापिरहेकी थिएँ ।
आगो दन्कँदै झन्–झ्न नजिक आउन थाल्यो । डरले म सिटमै बसिरहें । यत्तिकैमा मेरो हात कसैले तान्यो । त्यसबेलासम्म म अर्धचेत अवस्थामा पुगिसकेकी थिएँ । त्यसपछि के भयो मैले केही मेसो पाउन सकेकी छैन । अहिले म अस्पतालको बेडमा छु । मेरा श्रीमान र बच्चा हराइरहेका छन् । मैले सबैलाई सोधें । तर, कसैले पनि उत्तर दिएका छैनन् । सबैले ‘मिसिङ’ मात्रै भनिरहेका छन् । उनीहरु कहाँ छन् ? मलाई केही थाहा छैन । मसँगै आएका अन्य दुई साथी भने सकुशल भएको खबर पाएकी छु ।
(नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बंगाल विमान दुर्घटनामा घाइते भएकी बंगलादेशी महिला अल्मुन्नाहर अन्नीको बयान)
पूर्व एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्य तस्करीका नाइके
प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको पोल खुल्यो, मन्त्रालयका सचिवले गरे खुलासा
सिंहदरबारमै ओलीलाई टक्कर दिँदै ‘रिमाल राज्य’ ! इमान्दार नेतालाई निषेध, बिलौलियालाई छुट
कम्युनिस्ट नियतको पर्दाफास, कांग्रेस उत्रियो एक्सनमा
निर्मला प्रकरणमा ‘डीएनएमै गडबडी’ ! प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि निर्दाेषले किन स्वीकार्छन् अपराध ?